Nchọpụta ihe na-emepụta ala na ndị na - eweta ya - Solọ ọrụ mejupụtara ala nke China
Comprehensive set nke ntuziaka ala sampler FK-001
Enwere ike iji akụrụngwa a maka nyochapụta ubi dị iche iche na ọdịdị ala. Nchịkọta na mkpokọta akụrụngwa dị oke mfe. Igbe igbe pụrụ iche na-eme ka ọ dịkwuo mfe iburu ma zere mmebi nke ihe nlele nke ala site na ike mpụga.
Rotary mmanụ ụgbọala na-akwado ala sampler FK-QY02
Ngwaọrụ a bụ ike (mmanụ ụgbọala) ala sampler nke ụlọ ọrụ anyị mepụtara dabere na echiche ndị ahịa anyị, mkpa ndị ọrụ dị iche iche na nyocha ahịa. Ngwongwo na-agba site na mmanụ ụgbọala. Ọ bụ onye ama ama maka mbenata ike ọrụ nke ndị ọrụ nlele ala nke ukwuu, ịdị ngwa na ịdị mfe ịlele.